Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hakisay Lacagihii ay bil walba siin jirtay Maamul goboleedyada | SAHAN ONLINE
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo hakisay Lacagihii ay bil walba siin jirtay Maamul goboleedyada
MUQDISHO – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan hakaisay lacagihii ay siin jirtay bil walba Maamul goboleedyada ka jira dalka.
Lacag bileedka la siiyo bil walba maamulada dalka ayaa gaaraysay $150,000 (Boqol iyo konton kun oo dollar) ,waxaana lacagtan ay toos ugu dhacaysay jeebka Madaxda maamul goboleedyada.
Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhawaan ku soo rogtay in Maamul goboleedyada iney keenaan xisaab xirka lacagihii horay loo siiyey kaddib markii ay su’aal badan ka timid qaabka lacagahaas lagu maareeyey.
Sidoo kale Wasaaradda Maaliyadda ayaa ka dalbatay Wasaaradaha Maaliyadda maamul goboleedyada inay keenaan miisaaniyadda ay ku shaqeeyaan si qoondada lacageed ee dowladda bil walba bixiso ay qeyb uga noqoto.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa la sheegay in la hakiyey lacagaha si toos ah maamul goboleedyada loo siin jiray balse maamulka Hirshabeelle ayaa ahaa maamulkii u horeeyey ee laga hakiyey lacagaha bilihii June iyo July xilligaas oo uu Madax ka ahaa Madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cosoble.
Hakinta lacagahan ayaa ka dambeysay markii Xildhibaanada Hirshabeelle ay qeyla dhaan ka keeneen mushaar la’aan iyo in aanay jirin xafiisyo ay ku howlgalaan Wasaaradaha maamulka,halka Wasiirada iyo Madaxda ay noqdeen kuwa shaqadooda Laptop kaliya ku eg oo aan xafiis lahayn.
Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa iney la xisaabtanto maamul goboleedada gaar ahaan fulinta mashaariicyo taagan oo aan weli la fulin iyo arrimo kale oo Maaliyadeed sida mushaaraadka Xildhibaanada,Ciidamada iyo adeegyada kale ee bulshada.